Shir nabadeed ee beelo ku dagaallamay gobolka Bari oo ka furmay Bossaso. – Radio Daljir
Shir nabadeed ee beelo ku dagaallamay gobolka Bari oo ka furmay Bossaso.
Bossaso, Jan, 30 – Kulan lagu heshiisiinayo beelaha Cali Jibraahiil iyo Cali Saleebaan oo ay horay dhibatooyin colaadeed ku dhexmartay gobolka Bari ayaa maanta ka furmay magaalada Boosaaso.
Furitaanka shirka nabadaynta ah ayaa waxaa kasoo qaybagalay wasiirka amniga Puntland Col Khaliif Ciise Mudan,gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Gallan ,ugaas Xasan Ugaas Yaasiin, iyo isimo kasoo jeeda labada beelood ee nabadaynta u furantay.
Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Gallan oo ugu horayntii shirkan furay ayaa waxaa uu u rujeeyay isimada labada beelood inay ku guulaystaan heshiisiinta labada beelood ee colaaddu dhexmartay.
“wadankan aynu daganahay waxaa uu leeyahay cadaw fara badan oo duulaan ku ah jiritaanka dowladda Puntland,waxaanu rabnaa arintaasi maamul iyo shacab inaan meel uga soo wada horjeesnayo oo aan ka hortagno daldaloola cadawga uu ka faa’iidaysto”sidaasi waxaa yiri gudoomiyaha gobolka Md. Cabdisamad Maxamed Gallan.
Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin oo ka mid ah isimada ku howlan dhexdhexaadinta labada beelood ayaa waxaa uu kula dardaarmay labada beelood inay ka shaqeeyaan nabadda ayna ka hortagaan dhibaato curyaamin karta horumarka bulshada.
Wasiirka amniga iyo hubka dhigista dowladda Puntland Khaliif Ciise Mudan oo gabagabadii ka hadlay shirka nabadaynta labada beelood ee walaalaha ah ayaa waxaa uu sheegay dad muhiim ah inay dowladda iyo shacabka reer Puntland ku waayeen colaadda dhexmartay labada beelood ee walaalaha ah.
Waxaa uu uga mahadceliyay waxgaradka labada beelood inay ka shaqaeeyaan nabadgalyada ayna ka hortagaan wax kasta oo curyaamin kara horumarkooda.